QUUDINTA QUUDINTA EE GUGA AMA KA FIICAN SI AY BACRIMIYAAN BERRY - STRAWBERRIES
All oo ku saabsan quudinta strawberries guga: goorta, waxa iyo sida loo bacrimiyo strawberries guga
Way adag tahay in la helo qof aan jeclaan laheyn casiir ah, midho dhalaalaya oo macaan leh - strawberries. Waxay kobciyaan mucjisadan goobaha kala duwan ee cimilada ah, xayawaanka kala duwan, iyagoo isticmaalaya farsamooyin kala duwan oo kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, yar yihiin ogaadaan waxa ay tahay bacriminta for strawberries, sameeyey guga.
Marka quudinta strawberry guga bilaabmaa
Xilliga xagaaga strawberries waxaa la quudin karaa saddex jeer:
ka dib goosashada;
ka hor diyaarinta jiilaalka.
Bacriminta strawberry ugu horeysay waxaa la fuliyaa ka dib markii loosenayo guga, bilowga xagaaga xagaaga, marka cimilada diiran ee (April-May), iyo caleemaha ugu horeysay u muuqdaan on geedka. Xaaladdan oo kale, tallaabooyinka oo dhan waxaa loogu talagalay dhiirigelinta koritaanka caleemaha iyo caleemaha, sidaas darteed Bacriminta waa in ay ku jiraan nitrogen (waxaa ugu wanaagsan in la diyaariyo arimaha dareenka).
Quudinta quudinta leh iodine sidoo kale waa mid wax ku ool ah, taas oo si gaar ah u khuseyso guga.
Mar labaad strawberries waxaa la quudin jiray ka dib markii xirashada berry. Waqtigaan, xididada cusub ayaa la sameeyay iyo burooyinkana waxaa la dhigay xilli xilli ciyaareedka soo socda, sidaas darteed Bacriminta waa in ay ku jiraan potassium iyo xubno waxtar raad. Inta badan, marxaladdan sii kordhaya warshad, Doodwanaag ayaa loo adeegsadaa, iyo in lagu daro ciidda leh Bacriminta potash, ash waxaa lagu soo bandhigay ciidda.
Ma taqaanaa? Strawberries waxay leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh. Tusaale ahaan, waxa la yiraahdo fitamiin C waa ka hor intaan kaliya currants, iyo waxaa jira more folic acid in strawberries ka badan ee raspberries iyo canab.
Inta lagu jiro dhirta ubax, si loo kordhiyo dhalidda, waxaa lagula talinayaa in lagu buufiyo duurka leh xal of zinc sulphate ama boric acid. Inta lagu jiro buufinta, walxaha waxtarka leh ayaa si dhakhso ah ugu soo baxa caleenta. Samee nidaamkan fiidkii, cimilada iyo hawo qalalan.
Sida loo bacrimiyo strawberries guga
Sida ay sheegeen bannaanka u khibrad leh, dharka guga ee strawberries guga hore siin doonaa fursad ah si ay u ururiyaan dalagga hufan ee this berry kareysa. Laakiin nooc ka mid ah bacriminta ayaa ka fiican in la isticmaalo si aan wax u yeelin caafimaadka?
Maxay tahay inaanan abuurin bacriminta shaybaarrada kiimikada, bacriminta ugu fiican ee strawberries waa digada iyo humus.
Digada (mullein) - Qashin ka soo qolal leh xayawaan guri, isku dhafan iyaga oo soo saaraya. Waxaa si firfircoon loo isticmaalaa bacriminta carrada. Digada waa sidoo kale doorashada ugu wanaagsan ee bacriminta, haddii aad raadinayso, ka badan si aad u quudiso strawberries guga ka hor ubax.
Wixii 10 litir oo biyo ah, milixda 2 koob oo digada ah iyo ku dar qaado oo ah sodium sulfate. Dhamaan tan waxaa si weyn loogu qasi karaa gobolka kasheobraznogo, ka dib markii taas oo keentay natiijada soo baxay ayaa waraabiyey dhulka ka yar baadiyaha kasta (1 l). Waxa kale oo aad kala dillaaci kartaa digada oo hoosta xididdada strawberries, oo daboolka sare ku dabool leh lakabka dhulka (2-3 cm).
Humus - gebi ahaanba cawska laga jaro. Waxaa loo tixgeliyaa bacriminta ugu wanaagsan ee strawberries guga, maxaa yeelay waxay bixisaa diirada ugu badan ee nafaqooyinka foomka ah oo si fiican ugu nuugay by dhirta kaymo.
Digaag daroogada. Waa ilaha qani ku ah nitrogen. Waayo, strawberries ayaa daciif ah (qayb ka mid ah digada 20 qaybood oo biyo ah) xal of this organic organic. Faleebo joogta ah 3 maalmood iyo bacrimiya leh 0.5 litir oo isku dar ah ka yar baadiyaha kasta. Ka dib markii, dhirta si xoog leh u koraan iyo farxad leh miraha waaweyn.
Waa muhiim! Digada waxaa loo isticmaalaa kaliya foomka dib loo rogay, tan iyo maaddada cusub oo ka kooban tiro badan oo miraha weel diyaar u ah in ay Gaga ku on carrada bacrimiyey.
Dadku waxay yaqaanaan habab badan oo ah quudinta strawberry waxaanan diyaar u nahay in aan la wadaagno qaar ka mid ah dadka oo xiiseynaya su'aasha ah "Maxaa kale ee bacriminta strawberries?".
Waxyaalaha caanaha ah. Waxay si guul leh loo isticmaalo quudinta, sida strawberry jecel yahay ciid yar acidic. Intaa waxaa dheer, caanaha waxaa ku jira kalsiyum, sulfur, fosfooraska, nitrogen, amino acids iyo macdano kale. Waxaa ugu wanaagsan in lagu daro caano dhanaan ee humus, digada ama ash. Intaa waxaa dheer, caanaha la qasiqiyay ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso saxmada.
Kibis Bannaanka u badan ayaa ku andacoonaya in ay ka fiican tahay khamiirka in aysan jirin macnaheedu in lagu quudiyo strawberries bishii May. Fungus-ka waxaa ku jira kiimiko amma, borotiinno, macdan, si fiican u carrada u carrada. Rootiyada Strawberry waa la xoojiyay, berry wuxuu helayaa nafaqo wanaagsan wuxuuna kobcinayaa ballaaran.
Si arrintan loo sameeyo, rootiga waxaa lagu qooyay biyo 6-10 maalmood, ka dib markii xalka ujeedkiisu yahay qulqulaya biyaha ee saamiga 1:10. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa khamiirka khudradda nool: 200 g oo khamiir ah oo lagu qasi karo 0.5 litir oo biyo diirran ah oo ka baxsan 20 daqiiqo. Ka dibna ku dar milixda 9 litir oo biyo ah iyo ku shub biyo badan oo baadiyaha ah.
Boogaha. Laalaabtani ma dhaawici karo strawberries ama dadka. Si aad u diyaariso bacriminta, haramaha haray ka dib markii la jarjaro, laguna shubo biyo. Toddobaad ka dib, xal soo dhalaalay ayaa lagu shubay qudaarta. Laalaabtani waxay gacan ka geysan doontaa kordhinta tirada miraha, si xun u saameeya dhadhanka berry iyo ilaalinta strawberries ka soo cayayaanka qaar ka mid ah.
Ash. Ashaha guga for strawberries waa bacriminta aad u wax ku ool ah. Waxaa loo isticmaali karaa quudin iyo quudinta fooxa. Waxaad ku daadi kartaa dambas qallalan adoo isticmaalaya biyo ka hor inta aadan waraabin ama roob, waxaana loo isticmaali karaa xal. Si tan loo sameeyo, hal galaas oo ash ayaa lagu qasi karaa 1 litir oo biyo kulul, ka dibna isku dar ah ayaa lagu qasi karaa 9 litir oo biyo ah iyo waraabiyo heerka 1 litir 1 m².
Thanks to quudinta ee strawberries guga leh daaweyn dad, miraha waa casiir iyo waaweyn.
Ma taqaanaa? Isticmaalka maalin kasta ee strawberries waxay xoojisaa derbiyada xididdada dhiigga iyo difaaca jirka. Ka caawi buundooyinkan iyo la dagaalanka hurudda, iyo sidoo kale ka ilaalinta cudurrada viral. Iyadoo strawberries ku filan cuntada, waxaad diidi kartaa cuntada iodized.
Dusha sare ee labiska ee dharka maadooyinka
Bacriminta macdanta ayaa ah labo nooc:
aad u sarreeya - waxay ku kala duwan yihiin heerka nuugista (fosfooraska, magnesium, potassium, nitrogen);
dhaqdhaqaaqa hooseeya - u dhaqso gaabis (boron, birta, naxaas, manganese).
Bacriminta gu'ga ee strawberries waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta dhalidda. Ujeedadaas darteed, isticmaal:
ammonium phosphate oo lagu qasi karo amooniyam (2: 1) ee dareeraha dareeraha, heerka caadiga ah waa 15 g halkii 1 m²;
nitroammofoska - Dhirta sii kordhaysa ee carrada dhoobada ayaa si gaar ah u baahan in bacriminta this;
diyaarinta Bacriminta adag, oo ay ku jiraan potassium, fosfooraska, magnesium, nitrogen ("Chemira Lux", "Ryazanochka").
Bacriminta macdanta ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya helitaanka goosashada wanaagsan: marka ay jirto yaraanta nitrogen, miraha way yar yahiin, luminayaan dhadhankooda, caleentooduna waxay noqotaa mid cirro leh.
Si aad u hesho miraha sonkorta, strawberries waxay u baahan yihiin potassium. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay yar tahay, geedka si tartiib tartiib tartiib ah, iyo dayrta waxaa laga yaabaa in la baabiiyo.
Waa muhiim! Laguma talinayo in lagu quudiyo strawberries leh HOL xilliga gu'ga, sababtoo ah urobacteria weli waa nasasho iyo bacriminta aan la dheefin.
Waa maxay bacriminta macdanta ugu fiican ama organic
Waa wax aan suurtagal ahayn in si cad looga jawaabo in ay ka fiican tahay in la doorto strawberries - Bacriminta organic ama macdanta, tan iyo labadoodaba waxay leeyihiin saameyn togan ku koritaanka iyo fruiting.
Bacriminta macdanta, tusaale ahaan, waxay yihiin kuwo wax ku ool ah oo aan saameynin cabbirka iyo dhadhanka strawberries si fiican: berry koraan, macaan iyo qurux badan. Laakiin waa in si taxadar leh loo adeegsadaa, si adag u raacaan tilmaamaha. Xaddiga xad-dhaafka ah wuxuu saameyn ku yeelan karaa maaha oo kaliya goosashada, laakiin sidoo kale caafimaadka aadanaha. Intaa waxaa dheer, Bacriminta macdanta laguma talinayo in la isticmaalo in ka badan 2 toddobaad ka hor inta uu miro miro.
Bacriminta dabiiciga ah Ma siin doonaan berry waaweyn, laakiin waxay si buuxda ugu yihiin dadka. Intaa waxa dheer, arrinka organic waxaa lagu isticmaali karaa qiyaas kasta oo kasta, maaddaama dhirta ay qaataan nafaqooyin badan sida ay u baahan yihiin.
Waa muhiim! Dhar kasta waa in lagu hayaa saamiga lagu taliyey iyo diyaarinta maaddooyinka tayada leh - oo leh xad-dhaaf ah ee Bacriminta, strawberries bilaabi lahaa si degdeg ah u koraan, iyo ubaxyada iyo miraha noqon doonaa jaahil ah iyo daaho.
Noocyada quudinta qudaarta ee guga
Strawberries dressing ugu sareeya ee guga waa nidaam khasab ah, laakiin ma aha qof kasta ogyahay sida loo quudiyo strawberries dhalinyarada iyo waaweyn ee guga.
Sida loo quudiyo dhirta dhalinyarada
Strawberries yar yar beeray xilliga dayrta, guga, ma quudin kartid dhammaantood, ama isticmaal xalalka soo socda: on baaldi biyo ah qaadan 0.5 litir oo digada ama digada digaag, ku dar 1 tbsp. qaaddo sodium sulfate iyo ku shub isku dar ah ka yar baadiyaha kasta 1 litir. Xeerkani lama dhaafi karo.
Dharka ugu sareeya ee duurka qaangaarka ee strawberry
Strawberries, sii kordhaya ma aha sanadka ugu horeeya, sidoo kale waxay u baahan tahay daryeel gaar ah, sababtoo ah ciidda waa la dhammaystiray, iyo warshad ma laha meel ay ku qaataan walxo faa'iido leh. Sida loo quudiyo strawberries dadka waaweyn guga? Wixii bacriminta, waxaad isticmaali kartaa xal isku mid ah sida dhirta dhalinyarada, kaliya ka hor quudinta, marka dabacsan ciidda, dambaska ku saydhaa dhulka (2 koob oo halkii 1 m²).
Bannaanka u khibrad leh isticmaali hab kale: baaldi ah nettle ku shub biyo iyo ku adkeyso 3-7 maalmood. Xalkani waa bacriminta bani-aad u fiican. Waxay ku rusheeyeen strawberries bilowga ah ee abuurka baadiyaha iyo goosashada ka dib.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa xalka mullein (1 qayb), biyo (5 qaybood), superphosphate (60 g halkii baal) iyo ash (100-150 g halkii baaldi). Xalka ka soo baxa waxaa lagu shubaa gawsaha lagu sameeyey sariiraha oo leh qoto dheer oo 4-5 cm ah Caadi waa baaldi of Bacriminta 3-4 mitir. Ka dib markii habka, grooves daboolay dhulka iyo biyaha ku shubay.
Sannadkii labaad waxaad ku dari kartaa ciidda amooniyam (100 g halkii 1 m²), iyo sannadka saddexaad ee strawberry nolosha waxaa la quudin leh isku dar ah superphosphate (100 g), chloride potassium (100 g) iyo amooniyam (150 g). Isku darkaani waa ku filan 1 m².
Ka hor inta ubax, strawberries la quudiyo leh microelements: In baaldi biyo kulul walaaq 2 g of boric acid, galaas oo ash, 2 g of permiranate, oo ah qaado oo ah iodine. Ka dib marka isku dar ah la faafiyo, waxaa lagu buufiyaa duurka strawberry (fiidkii). Xilliga qaboobaha ee strawberries ayaa kaalin muhiim ah ka qaata helitaanka beergooyska - waxay ka caawin doontaa geedka si uu u soo kabsado ka dib jiilaalka ka dibna ka sameeyaan ugxan.